Qisada Dhagxaanta Nool ee Romaniya!
Tuulada Kustisti ee Dalka Romaniya waxa jirta arrinta dhagxanta cajiibka ah. Tuuladan ayaa dhagaxan soo jiidatay dalxiisayaasha can ku noqotay. Dadka deegaanka ayaa Dhagxanta u bixiyay “Trovants” oo luqada dalkooda ah “dhagxanta nool”. Aqoonyahanada macdanta ayaa soo saaray warbixino dhagxantan fsharax ka bixinaya.